Indawo enhle ethokomele ezintabeni zaseGalile
Parod, North District, kwa-Israel
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Meirav
U-Meirav Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elithokomele elinendawo eluhlaza okotshani nxazonke, elisendaweni ephambili- enhliziyweni yezintaba zaseGalile, eKibbutz Parod. I-Parod yaziwa ngemvelo yayo yasendle, imibono emangalisayo nxazonke, ibheka phezu kwe-Kinneret ne-Golan hights, futhi ngokuhamba kwemizuzu embalwa, ungajabulela umfudlana omuhle weParod nezimpophoma. ungavakashela nomfudlana we-Amud, ithuna likaRashbi, iDruz kanye nemizana yase-circassian.
I-kibutz inendawo yokudlala, inkundla yezemidlalo, isitolo segrosa, i-rustic zoo kanye ne-minigolf.
Isikwele esisha esingamamitha angu-50 esifakwe ngokugcwele efulethini elihle eliklanywe kahle elibheke kuvulandi omuhle okhuliswe ngaphandle, lenziwe ngegumbi lokuhlala elibanzi nekhishi elihlome ngokuphelele lapho ungapheka khona, igumbi lokulala elikhulu elithokomele, kanye negumbi lokugezela elihle elinomshini wokuwasha.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho
uzoba nayo yonke into oyidingayo, i-cable TV, i-wifi, amathawula ahlanzekile nezinto zokulala, imicamelo, izingubo zokulala, izinto zangasese, ext.
Ifulethi lilungele imibhangqwana noma imindeni futhi. Umbhede wezingane kanye nesihlalo sokudlela kungahlinzekwa futhi.
1 umbhede wosofa, omatilasi abangu- 2
5.0 ·39 okushiwo abanye
I-Kibbutz Parod inesitolo segrosa, inkundla yokudlala yezingane, inkundla yezemidlalo, indawo yegalofu encane, indawo yokucima ukoma yaseMel ukuze uthole isiphuzo, i-rustic zoo kanye nefekthri edumile ethi "Saba Haviv".
sihlala ezitebhisini ukuze ukwazi ukusithinta ngayo yonke into oyoyidinga.
UMeirav Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Parod namaphethelo